Nzụlite na Akụkọ-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Ọrụ magnetik dị elu bụ arụmọrụ nke injinị magnesia ka mma. Maka ndị ahịa chọrọ enyemaka nrụpụta ma ọ bụ atụmatụ sekit dị mgbagwoju anya. QM si otu ndi injinia nwere ngwa oru na injinia nwere ihe omuma banyere ahia no na oru gi. QM ndị injinia na-eso ndị ahịa azụma iwelite ma ọ bụ gosipụta atụmatụ ndị dị adị yana zụlite atụmatụ ọhụụ na -emepụta mmetụta ndọta pụrụ iche. QM emeputala magnetik magnetiki nke naeme ka ikike siri ike, nke edo ihe ma obu nke magnetiki a ma ama nke na –emechi oge buru ibu na magnetik magnet na magnet magnet. Ndị ahịa na-enwe obi ike mgbe hey na-eweta echiche dị mgbagwoju anya ma ọ bụ echiche ọhụụ na QM ga-ezute ihe ịma aka ahụ site na ịbịpụta site na afọ 10 nke ọkachamara ndọta pụtara. QM nwere ndị mmadụ, ngwaahịa na teknụzụ nke na-etinye magnet arụ ọrụ.
Nhọrọ ndọta maka ngwa niile ga-atụlerịrị okirikiri magnetik na gburugburu ya. N'ebe Alnico kwesịrị ekwesị, enwere ike belata nha magnet ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ magnetizing mgbe mgbakọ gachara. Ọ bụrụ na ejiri ya n’onweghị ihe ndị ọzọ dị na sekit, dịka ọ dị na ngwa nchekwa, ịdị ogologo ga-aba nha dayameta (nke metụtara ya na permeance coefficient) ga-adị ukwuu iji mee ka magnet na-arụ ọrụ n’elu ikpere ya na akụkụ abụọ nke Quagrant demagnetization. Maka ngwa dị oke mkpa, enwere ike idobe ihe nrịgo Alnico na ọkwa nha anya mgbado ọkụ chọrọ.
A-ngwaahịa nke ala coercivity bụ uche na demagnetizing mmetụta n'ihi mpụga magnetik ubi, ujo, na ngwa okpomọkụ. Maka ngwa ndị dị oke egwu, Igwe Ọdụdọ Alnico nwere ike ime ka ọnọdụ okpomọkụ kwusi iji belata mmetụta ndị a E nwere klaasị anọ nke igwe ahịa azụmaahịa ọgbara ọhụrụ, nke ọ bụla dabere na ngwongwo ha. N'ime klaasị ọ bụla bụ ezinụlọ akara ugo na nke nwere magnetik. Ndị otu klas a bụ:
NdFeB na SmCo na-akpọkọta Rare Earth magnet n'ihi na ha abụọ nwere ihe sitere na otu ihe dị iche iche dị iche iche. Neodymium Iron Boron (nchịkọta ihe niile Nd2Fe14B, nke a na-akpọkarị ya na NdFeB) bụ mgbakwunye azụmaahịa kachasị ọhụrụ na ezinụlọ nke ihe ndọta ọgbara ọhụrụ. N’ụlọ dị elu, igwe ihe NdFeB na-egosipụta ihe kachasị dị elu nke ihe magnet niile. A na-emepụta Samarium Cobalt na ihe abụọ: Sm1Co5 na Sm2Co17 - nke a na-akpọkarị SmCo 1: 5 ma ọ bụ SmCo 2: 17. 2dị 17: 1, nke nwere ụkpụrụ Hci dị elu, na-enye nkwụsi ike dị ukwuu karịa ụdị 5: 2. Ejiri Ceramic, nke a makwaara dị ka Ferrite, magnets (ihe niile bụ BaFe3O2 ma ọ bụ SrFe3O1950) bụ ndị ahịa kemgbe afọ 1930 ma na-aga n'ihu na-eme ọtụtụ ihe taa n'ihi ụgwọ dị ala ha. Specialdị pụrụ iche nke seramiiki magnet bụ ihe "Na-agbanwe agbanwe", mere site na ijikọ paịl Ceramic na ihe ngbanwe mgbanwe. A na - ere ahịa Alnico (ihe niile mejupụtara Al-Ni-Co) na XNUMXs ma ka na-ejikwa ya eme ihe taa.
Ihe ndị a na-enye ọtụtụ ihe dịgasị iche iche na-anabata ọtụtụ ngwa chọrọ. Ezubere ihe ndị a iji nye ụzọ dị obosara ma dị irè maka ihe ndị a ga-atụlerịrị na ịhọrọ ezigbo ihe, klas, ogo, na ogo ndọta maka otu ngwa akọwapụtara. Chaatị dị n'okpuru ebe a na-egosi ụkpụrụ omume ndị dị mkpa maka akara isi ihe dị iche iche maka iji ya tụnyere. A ga-atụle ụkpụrụ ndị a n'ụzọ zuru ezu na ngalaba ndị na-esonụ.
Atụmatụ ndọta ndọta
* T max (okpomọkụ kachasị dị irè n'ọrụ) bụ maka naanị ihe. Okpomoku kachasi dị elu nke magnet ọ bụla dabere na sekit magnet na-arụ ọrụ.
Ọ nwere ike ịdị mkpa ịkpụ mkpuchi dị ka ngwa maka ihe ha bu n'obi. Ebube mkpuchi na-eme ka ọdịdị ahụ dị mma, iguzogide corrosion, nchebe pụọ na iyi ma ọ nwere ike ịbụ ihe dabara adaba maka ngwa ndị dị na ọnọdụ ime ụlọ dị ọcha.
Ihe ndi Samarium Cobalt, ihe ndi Alnico ndi nwere corrosion na adighi ike, ha achoghi kwa mkpuchi ya ka aghachie corrosion. A na-enye Alnico ngwa ngwa maka àgwà ịchọ mma.
Ihe ndị a na-akpọ NdFeB nwere ihe pụrụ iche na corrosion ma na-echekwa ya n'ụzọ dị otu a. Enwere akwa mkpuchi dị iche iche kwesịrị ekwesị maka ndọta na-adịgide adịgide, Ọ bụghị ụdị mkpuchi ga-adabara ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ndọta, na nhọrọ ikpeazụ ga-adabere na ngwa na gburugburu ebe obibi. Nhọrọ ọzọ bụ ịdọba ndọta ahụ na mpụga mpụga iji gbochie corros na mbibi.
Nchedo Nwa Oge
Magburu onwe ya oke megide iru mmiri
Ihe ọma megide nnu nnu
Agba gbara agba
Magburu Eke na Mgbuka Nnu
Elu megide Megide
Nwa, Uhie, Ocha
Magburu oke iru mmiri
Nipo + Epoxy Ni
Ekpokọta Zn +
Mkpoko Ghaa ide mmiri, nnu nnu. Superior Against Solvents, Gases, Fungi na Bacteria.
Igwe ndọta ga-adịgide adịgide n'okpuru ọnọdụ abụọ, Magnetized ma ọ bụ magnetized, anaghị enwekarị akara ngosipụta ya. Ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ, anyị nwere ike akara polarity site n'ụzọ ekwenye. Mgbe ị na-ewepụ usoro a, onye ọrụ kwesịrị ịgwa ọnọdụ ọkọnọ ma ọ bụrụ na akara nke polarity dị mkpa.
Igwe ndọta magnetization nke magnet na-adịgide adịgide nwere ụdị ihe ndọta na-adịgide adịgide na ike ya ịkpa ike. Ọ bụrụ na ndọta chọrọ ndọta na demagnetization, biko kpọtụrụ anyị ma jụọ maka nkwado usoro.
E nwere ụzọ abụọ iji mee ka ndọta na-adọta ndọta: DC DC na pulite ndọta.
Enwere ụzọ atọ iji kpochapụ magnet: demagnetization site na ikpo ọkụ bụ usoro usoro pụrụ iche. demagnetization na AC ubi. Demagnetization na DC ubi. Nke a na-ajụ maka ndọta siri ike na ikike demagnetization siri ike.
Ọdịdị jiometrị na ndọta magnetization nke magnet na-adịgide adịgide: n'ụkpụrụ, anyị na-ewepụta ndọta na-adịgide adịgide n'ụdị dịgasị iche iche. Ọtụtụ mgbe, ọ na-agụnye ngọngọ, diski, mgbanaka, akụkụ wdg Ihe atụ zuru ezu banyere ndọta ndọta dị n'okpuru:
(Akwụkwọ eserese na-egosi ụdị nduzi nke Ijikwa mmadụ)
gbakwunyere site na ọkpụrụkpụ
atomatik gbakwasara na ngalaba
gbakwunyere na ụbụrụ akụkụ n'otu ihu
multipole gbakwasara na ngalaba na mpụga dayameta *
multipole gbakwasara na ngalaba na otu ihu
radially gbakwunyere *
gbadoro ụkwụ site na dayameta *
multipole gbakwunyere na akụkụ na dayameta *
ihe niile dị ka ihe isotropic ma ọ bụ ihe anisotropic
* naanị dị na isotropic na ụfọdụ ọgwụ anisotropic naanị
Ewezuga ogo na njiri magnetization, akụkụ kachasị nke magnet na-adịgide adịgide agaghị agafe 50mm, nke mpaghara nghazi na akụrụngwa na-emehie. Akụkụ dị na ụzọ unmagnetization ahụ ruru 100mm.
Ntinye na-abụkarị +/- 0.05 - +/- 0.10mm.
Ekwu okwu: Enwere ike ịmepụta ụdị ndị ọzọ dịka ihe nlele nke ndị ahịa ma ọ bụ nke na-acha anụnụ anụnụ
kacha nta 3.80mm
Radius nke dị n'ime
kacha nta 1.9mm
1. Ihe ndọta magnetized na-adịgide adịgide nwere nnukwu ndọta siri ike na-adọta ígwè na ihe ndọta ndị ọzọ gbara ha gburugburu. N'okpuru ọnọdụ a na-ahụkarị, onye ọrụ ntuziaka kwesịrị ịkpachara anya iji zere mmebi ọ bụla. N'ihi ike magnetik siri ike, nnukwu ndọta dị nso na ha na-ebute ihe mmebi ahụ. Ndị mmadụ na-edozi magnetị ndị a oge niile ma ọ bụ gburugburu. N'okwu a, anyị ga-echekwa uwe mkpuchi na arụ ọrụ.
2. N'ọnọdụ a nke ndọta siri ike, akụrụngwa elektrik ọ bụla nwere akara ya na mita ule nwere ike gbanwee ma ọ bụ mebie. Biko hụ na kọmpụta, ihe ngosi ya na mgbasa ozi ndọta, dịka ọmụmaatụ ndọta akpọki, teeti magnetik na teepu vidiyo na wdg, dị anya na ihe ndọta ahụ, ka gafere karịa 2m.
3. Mkpokọ nke ike ndị na-adọta ihe n'etiti ihe nrịba ama na-adịgide adịgide ga-eweta nnukwu ọkụ. Ya mere, ekwesighị ka ihe dị ka ire ọkụ ma ọ bụ ihe mgbawa na gburugburu ha.
4. Mgbe ekpughere magnet na hydrogen, amachibidoro iji magnet na-adịgide adịgide na-enweghị mkpuchi mkpuchi. Ihe kpatara ya bu na anwansi nke hydrogen ga-emebi microstructure nke magnet ma duga idubigide ihe ndi magnetik. Thezọ kachasị mma iji chebe magnet n'ụzọ dị irè bụ itinye mkpọchi ndọta n'ọnọdụ ma mechie ya.